Kuhle kwaDrake - Izinto Zobugcisa
UDrake uthetha yonke le ngoma ngobomi babasetyhini kwiminyaka yedijithali. Iisampulu zekwayara zikaLauryn Hill zika-1998 zabetha 'Ex Factor.' UCardi B ukwadibanise into enye kwi 'Qaphela,' eyayilahlwe kwiveki ephelileyo. UDrake ngaphambili wayethathe isampulu ye-Hill's 'Doo Wop (loo nto)' kwimidlalo yakhe enomxholo othi 'Usuku loYilo.'
Ividiyo ka-Karena Evans ekhokelwe yinkwenkwezi ibonisa uthotho lwabafazi kwizikhundla zamandla. Babandakanya abadlali beqonga uOlivia Wilde, uZoe Saldana, uTiffany Haddish, uMichelle Rodriguez Letitia Wright. U-Emma Roberts, u-Issa Rae, uTracee Ellis Ross noRashida Jones kunye nemvumi uSyd kunye nomdanisi we-ballet uMisty Copeland. UDrake unokubonakala edanisa kunye nomkhondo.
Ingoma yaveliswa nguMurda Beatz ngemveliso eyenziweyo ephethwe nguBlaqnmild. UMurda Beatz, owaziwa ngomsebenzi wakhe neMigos, ngaphambili wavelisa iingoma ezinje zeDrizzy ezinje 'Ndikunye Nawe,' 'iPortland' kunye 'Nengxoxo Ende.'
'Nice For What' ifaka iiklip kwi-intro nakwibhulorho evela kwi-Big Freedia, nothi uncede ekuphakamiseni uhlobo olutsha lwe-hip hop olubizwa ngokuba yi-bounce music. UFreedia wayechulumancile kukwamkelwa kumculi oqhelekileyo njengoDrake. Uxelele IFader :
'Ndonwabe kakhulu ngelizwi lam ekuqaleni kwale ngoma ... 'kuyo.'
Ingoma inezinto ezongezelelweyo ezenziweyo ligqala laseNew Orleans kwiwadi yesihlanu uWard Weebie, osebenze namabali eBig Easy njengoLil Wayne kunye noMaster P.Weebie baqala ukunxibelelana noDrake ngomphathi kaWayne uCortez Bryant kwaye waqaphela kwangoko ukuba i-MC MC 'umsebenzi wakhe wesikolo kumculo onqabileyo.'
'Andikaze ndibone okanye ndive naliphi na igcisa elingaphandle kweNew Orleans lifumane into elungileyo ngaphandle kwale,' u-Weebie wachazela Ubuchule . 'Le nto ibifile kangaka.'
'Abazange basijonge, khange basindise, basivumele ukuba senze into esiyenzayo,' u-Weebie wongeze malunga neseshoni ye studio kunye nomlingane wakhe osoloko esenza imveliso uBlaqNmilD. 'Ukuba ujonga umkhondo wokwenyani weNew Orleans, ikunika amandla aphezulu, yenze iterk, siqhawule amazwi.'
'Ndiyayithanda into' eyaqala ngo- # 1 kwi-Hot 100 yomhla wamashumi amabini ananye ku-Epreli 2018 ithathe indawo yengoma kaDrake, ' Icebo likaThixo , 'kwindawo ephezulu. Umlingisi wangaphambili owaziphakamisa kule ngqungquthela njengegcisa elikhokelayo yayinguJustin Bieber ' Zithande ithathe indawo 'Uxolo,' ngoFebruwari 13, 2016.
UDrake wabhala le ngoma endlwini yakhe ngelixa wayedlala umdlalo wevidiyo uNBA 2K noMurda Beatz. Bathathe isigqibo sokusampula umculi obhinqileyo, kwaye bahamba noLauryn Hill's 'Ex-Factor,' ingoma evela kwi-albhamu yakhe yeGrammy-gobbling Ukucwangciswa kweNduli yaseLauryn .
UMurda Beatz ukhumbule kwi Rap Radar ipodcast: 'Sikhethe le ndawo, sayinqunqa, ndenza isandi xa wayedlala u-2K.'
Nje ukuba uDrake eve ukubetha, wayeka ividiyo yakhe yokudlala ukuqala ukubhala ingoma. 'Wahlala apho, wabhala ii s phambi kwam, wasika ii s - t phambi kwam, utshilo umlimi. Sigqibile ukwenza, ukubetha kunye nengoma, mhlawumbi njengeyure enesiqingatha. Emva koko wagqiba ivesi yesibini kamva. '
Kananjalo nokuboleka kwiLauryn Hill's 'Ex-Factor' (1998), 'Nice For What' kunye neesampulu 'zoTsala iRap' zii-Showboys (1986) kunye ne 'Get Roll On On' nguBig Tymers (2000). Ngenxa yoko kukho ababhali beengoma abangama-21 bebonke.
Imvumi uSam Skully wamangalela bobabini uDrake kunye neBig Freedia ngesityholo sokusebenzisa ibet yakhe ngaphandle kwemvume. U-Skully ubanga ukuba inxenye yendlela yakhe ka-2000 ethi 'Roll Call' yathatyathwa njengesampulu yale ngoma, kunye 'Neemvakalelo Zam.'
USkully ubanga ukuba akazange akhe asondele kuDrake okanye nakubaphi na abantu bakhe malunga neesampulu ekuthiwa azicaciswanga. Ukuza kuthi ga ngoku wacela ukonakaliswa kunye nokusikwa kweenzuzo ezenziwe ziingoma zombini.
ii-beatles into oyifunayo luthando
asingabantu esingabaziyo ukuthanda uyayazi imigaqo kwaye ngokunjalo nam amazwi
lyrics septemba umhlaba nomoya
lithetha ntoni elinye isitena eseludongeni
thatha elinye icala lentliziyo yam
iinyembezi zoloyiko wonke umntu ufuna ukulawula umhlaba